Hypnotix: ngwa nkwanye IPTV na nkwado maka TV ndụ na ihe ndị ọzọ | Site na Linux
Hypnotix: ngwa nkwanye IPTV na nkwado maka TV ndụ na ihe ndị ọzọ
Linux Post Wụnye | 14/09/2021 06:00 | Aplicaciones, Noticias
Mgbe a bịara n'iji kọmputa anyị eme ihe GNU / Linux ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Usoro njikwa na ebumnobi nke ntụrụndụ, ntụrụndụ ma ọ bụ ntụrụndụ anyị na -ekwukarị na -enwe obi ụtọ egwuregwu, egwu, vidiyo, na n'ọnọdụ ndị ọzọ ruo Igwe onyonyo, ihe nkiri na usoro n'ịntanetị. Maka nke ikpeazụ, enwere ọtụtụ weebụsaịtị yana ngwa dị, dịka "Hypnotix".
"Hypnotix" Ọ bụ ngwa ala nke GNU / Linux nkesa oku Mint eji amụba Igwe onyonyo, ihe nkiri na usoro n'ịntanetị. Nke kachasị mma bụ na enwere ike iji ya na ihe ndị ọzọ Distros, nke ewepụtara ma ọ bụ dakọtara na obere nka.
Ma ebe ọ bụ na anyị na -ebipụta oge niile gbasara ngwa ndị ọzọ yiri ma ọ bụ metụtara omume ịnụ ụtọ Igwe onyonyo, ihe nkiri na usoro n'ịntanetị, anyị ga -ahapụ ozugbo n'okpuru ụfọdụ njikọ kacha ọhụrụ na ụfọdụ n'ime anyị gara aga metụtara posts. Ka ndị nwere mmasị inyocha ha mgbe ha dechara akwụkwọ a nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe:
"MegaCube bụ ọrụ na -emepe emepe, onye ọ bụla nwere ike ịnweta ya, na -enweghị usoro ịkwụ ụgwọ. Ebumnuche ya bụ inye ndị ọrụ ịntanetị ahụmịhe dị mfe, ngwa ngwa na nke bara uru iji lelee telivishọn n'ịntanetị, na -ezere nsogbu ndị ama ama ha na -eche ihu mgbe ha na -achọ ikiri telivishọn site na ihe nchọgharị. Na mgbakwunye, ọ na -abịa na mmemme maka Windows (.exe) na Linux (.AppImage / .tar.gz), ọ na -abịa na nkwado asụsụ n'asụsụ Spanish, Bekee, Portuguese na Italian. Dị ka enwere ike ịhụ ma budata na saịtị ha GitHub." Megacubo: Ọ bara uru ọtụtụ asụsụ na ịba ụba ọkpụkpọ IPTV
1 Hypnotix: Ngwa Linux Mint dị ala
1.1 Kedu ihe bụ Hypnotix?
1.2 Kedu otu esi etinye Hypnotix?
1.2.1 Na Linux Mint
1.2.2 Na Distros ewepụtara ma ọ bụ dakọtara
1.4 Ndị ọzọ dị
Hypnotix: Ngwa Linux Mint dị ala
Kedu ihe bụ Hypnotix?
Dị ka gị ngalaba ngalaba ke ukara website nke Mint Linux dị na GitHub, "Hypnotix" a kọwara nkenke dị ka:
"Onye ọkpụkpọ IPTV M3U."
N'okpuru ebe a, ha na -akọwa ihe ndị a gbasara ya:
"Hypnotix bụ ngwa nkwanye IPTV na nkwado maka TV, ihe nkiri na usoro."
Ha gbakwụnyere na ọ bụ dakọtara na ndị na -eweta IPTV Kedu ihe ha na -eji:
URL ndị M3U
Ndetuta egwu ọkpụkpọ mpaghara M3U
Kedu otu esi etinye Hypnotix?
Na Linux Mint
Ebe ọ bụ, ọ bụ ngwa Linux Mint ala ọ ga -ezuru naanị ya wụnye ya nke ọma site n'aka ya Ụlọ ahịa ngwanrọ o Onye njikwa ngwugwu eserese. Ma ọ bụ na -emezughị nke ahụ, site na ọnụ (console) na -agba ọsọ ndị a iwu ịtụ:
Na Distros ewepụtara ma ọ bụ dakọtara
Na ndị ọzọ Distros, nke ewepụtara ma ọ bụ dakọtara nwere ike n'ezie siri ike mee ka ọ rụọ ọrụ, n'ihi nsogbu ịdabere, enweghị ọba akwụkwọ n'etiti nsogbu ndị ọzọ maka nrụnye ya ma ọ bụ arụ ọrụ nke ọma. Nke ahụ bụ, naanị budata ma wụnye installer dị .deb dị na nchekwa gị anaghị eme ka ọ rụọ ọrụ n'ọtụtụ oge.
Agbanyeghị, anyị na -eso usoro a nke nwalere nke ọma karịa ka ọ dị na mbụ Respin Linux akpọ Ọrụ ebube GNU / Linux, nke dabere na MX Linux 19 (Debian 10), nke ahụ ewulitela na-eso nke anyị «Na-eduga na Snapshot MX Linux».
Wụnye ebe nchekwa Butterfly: «kelebek333/mint-tools»
Melite ndepụta ngwungwu
Tinye igodo ebe nchekwa
Dezie ebe nchekwa ihe
Ma gbanwee okwu imikpu site ebe obibi ma ọ bụ ọzọ dakọtara na Distro gị site na ịhọrọ n'etiti ndị a: Bionic, Focal, Groovy, Hirsute na Impish.
Melite ndepụta ngwugwu ọzọ
Ọ bụrụ na ihe niile agaala nke ọma, ịnwere ike ịgba ọsọ ma jiri ya na -enweghị nsogbu ọ bụla "Hypnotix" gbasara ya GNU / Linux Distro, dị ka a hụrụ na foto ndị a.
Ndị ọzọ dị
Rakuten TV: Otu esi lelee ọdịnaya n'efu site na Linux PC
Pluto TV: ga - ebute ọwa ọhụụ ọhụụ ọhụụ
Ka ị banyekwuo n'ime Nhazi "Hypnotix" pịa ọzọ njikọ. Na inyocha ụfọdụ Ndepụta M3U n'efu pịa ọzọ njikọ.
Na nkenke, na ngwa Linux Mint ala oku "Hypnotix" bụ nhọrọ na -atọ ụtọ inyocha gbasara anyị GNU / Linux Distros mgbe a bịara n'ịhụ TV, ihe nkiri na usoro online site IPTV gụgharia eji Ndepụta M3U.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Hypnotix: ngwa nkwanye IPTV na nkwado maka TV ndụ na ihe ndị ọzọ
Ndewo, ọ nwere nkwado maka chromecast ma ọ ga -ekwe omume, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enwere m ihe nkiri na laptọọpụ m, enwere m ike ibunye ya na igwe onyonyo dịka nke vlc dịka ọmụmaatụ?
Ekele, Juanjosegarcia. Daalụ maka okwu gị. Enweghị ebe m nyochara ka m hụrụ ntụaka maka arụmọrụ ahụ na Hypnotix. Ebe ọ bụ na Hypnotix ka na -eto eto, ọ ga -ekwe omume na ha ga -agbakwunye ọrụ a na ndị ọzọ n'oge ọ bụla. Kedu nke ga -adị mma.
Na -arụ ọrụ nke ọma, ọbụlagodi na nnukwu ndepụta.
Ọ dị ụkọ, igwe nchọta ọwa, ị nwere ike mebie….
Ọzọkwa nkwado dị mma maka asụsụ na mmeputakwa na igbochi «timeshift», ebe ọ bụrụ na ị metụrụ wiil òké aka, ị na -egbu oge ịmụpụta…. na mgbe bụ kpọmkwem ...
Ekele, Zycoxy3. Daalụ maka nkọwa gị, na maka ịgwa anyị ahụmịhe gị na amụma gị gbasara ngwa dị ụtọ na nke bara uru.
yt-dlp, ndụdụ nke youtube-dlc nwere nkwalite ole na ole